Qorfaha: waa maxay sidee se u rakibtaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19? | Laga soo bilaabo Linux
Qoraxda waa qurux iyo shaqeyn Deegaanka Desktop, oo ku saabsan aanaan daabicin badanaa, innaga oo ah qoraalkii ugu dambeeyay qeexayaa waxa ku saabsan, in ka badan 3 sano ka hor.
Tan waxaa hubaal u ah xaqiiqda ah in guud ahaan, laga hadlo oo keliya markii laga hadlayo Linux Mint, tan iyo markii la yidhi Deegaanka Desktop wuxuu ku dhashay sidan Qaybinta GNU / Linux. Sidaa darteed, qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa gaar ahaan Maxay tahay? y Sidee u rakibtaa?. Adkeynaya, dabcan, hada DEBIAN GNU / metadistribution Linux, ee ugu dambeeyay version, ka lambarka 10, magaca summada Buster. Kaas oo sidoo kale hada aasaas u ah qaybinta MX-Linux 19 (Duckling xun).
Abuuraha (Linux Mint) wuxuu sheeganayaa in qorfe yahay:
"Desktop Linux leh naqshad dhaqameed, oo lagu dhisay teknolojiyad casri ah iyo soo bandhigida astaamo cusub oo cusub. Cinnamon waa desktop Linux ah oo bixiya astaamo casri ah oo casri ah iyo khibrad adeegsi dhaqameed. Qaab-dhismeedka kumbuyuutarka wuxuu la mid yahay Gnome 2 oo leh farsamada Gnome Shell ee salka ku haysa. Qorfe wuxuu ka dhigayaa dadka isticmaala inay dareemaan inay guriga la joogaan khibrad desktop-ka fudud loo isticmaali karo oo raaxo leh. Qaybta qorfaha ee barta Linux Mint ee GitHub
1 Dhammaan wixii ku saabsan qorfe
Dhammaan wixii ku saabsan qorfe
Mashruucu waa Qoraxda la sii daayay taariikhda December 20 ee 2011 laakiin si guud ayaa loogu dhawaaqay Janaayo 2 ee 2012 in baloogga Linux Mint. Noockiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ku saabsanaa Linux Mint 12 "Lisa".
Laga soo bilaabo 2.0 version, Qorfe waa a Deegaanka Desktop Buuxda, oo kaliya maahan horudhaca GNOME sida GNOME Shell iyo Midnimo.
Waqtigan xaadirka ah waxaa loogu talagalay version deggan 4.4.2
Ansixin heer sare ah oo weyn Linux Mint Distro.
Waxay ku wajahan tahay hagaajin wax soo saar isticmaalaha nidaamka qalliinka.
Waxay bixisaa a dheelitirka fiican inta udhaxeysa xawaaraha, xasiloonida iyo isticmaalka.
Wuxuu bilaabmayaa inuu ahaado lagu daro keydadka oo badan oo Distros ah.
Muy la hagaajin karo oo khafiifa, gaar ahaan heerka Guddi iyo Desktop iyada oo loo marayo dejinta horumarsan iyo sii kordhistooda mawduucyada, tufaaxyada, miisaska iyo kordhinta.
Iswaafajinta asaliga ah ee codsiyada GNOME3 maxaa yeelay labaduba way istcimaalaan GTK +.
Waxay ku habboon tahay dadka bilaabaya ka haaji Windows-ka una gudba GNU / Linux, tan iyo markii ay interface iyaga bixisaa a jawi xoogaa la yaqaan oo runtii fududahay in la isticmaalo.
Caadi ahaan cun a qadar badan oo kheyraad ah (RAM iyo CPU), oo la mid ah bii'adaha desktop sida KDE Plasma iyo GNOME.
Loogu talagalay in lagu shaqeeyo dardargelinta qalabka, sidaa darteed waxay ugu shaqeysaa sida ugu fiican kaarka sawirada iyo kombiyuutarka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay qaab koodhadh xawaareyn kale oo software ah.
Iyo sabab la mid ah hawlgalka dardargelinta qalabka badanaa waxay soo bandhigtaa iswaafaqla'aanta isticmaalka Mashiinnada Farsamada, sida VirtualBox.
Degelka rasmiga ah ee Mashruuca Qorfaha
Degelka rasmiga ah ee 'Disto Linux Mint'
Halka aad ka heli karto macluumaad iyo / ama soo dejiso Dulucda, Tufaaxa, Miisaska iyo Kordhinta ku saabsan qorfe, ama arag horudhac wargelin ah, ka soo dejiso Distro, arag mashaariicda iyo kooxaha la xiriira, iyo waxyaabo kale oo badan. Xiriirimaha soo socda ayaa sidoo kale la heli karaa si loogu kabo macluumaadka Qoraxda:
Barta Linux Mint
Madasha Linux Mint
Beesha Linux Mint
Mashaariicda Linux Mint
Meel ku saabsan qorfe GitHub
Xullo Deegaanka Qorfaha iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Nota: Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa a Desktop Environment ku saleysan Qoraxda fudud ama dhammeystiran adigoo beddelaya xirmada cinnamon by cinnamon-core o cinnamon-desktop-environment.
Dib u bilow oo soo gal adoo dooranaya Deegaanka Desktop Qoraxda, haddii ay dhacdo inaad haysato wax ka badan hal Deegaanka Desktop rakibay oo aanad dooran Maareeyaha Soo-galida qorfe-fadhiga.
Xusuusnowna, kani waa kan boostada afraad taxane ah oo ku saabsan Goobaha GNU / Linux Desktop. Kan hore wuxuu ku saabsanaa GNOME, markaa KDE Plasma y XFCE. Halka kuwa soo socda ay ku saabsan yihiin MATE, LXDE iyo ugu dambeyn LXQT.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entorno de Escritorio» lagu yaqaan magaca «Cinnamon», taas oo ka mid ah kuwa badan ee jira, waa mid ka mid ah kuwa ugu xarrago badan uguna dareeraha badan xilligan adduunka «Distribuciones GNU/Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qorfaha: waa maxay sidee buu ugu rakibaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
Iyada oo debian ay noqotay desktop-ka aan jeclahay maxaa yeelay waxaan si dhakhso ah u haysan karaa wax kasta oo gacanta ku jira, gnome iyo KDE waa kuwo cajiib ah oo ka ballaadhan intaas, laakiin ma jecli inaan sameeyo qasabno badan si aan u helo meel, fududaanta qorfe, tufaaxa cimilada , tuuryo ka mid ah guddiga oo haddii aan ku darno conky waxaan ku haystaa wax walba meesha aan doonayo.
Dhibaatada Debian ayaa ah inaysan si fiican ugu imaan sidii Mint. Waa inaad ku dartaa, tusaale ahaan, xirmo-cusboonaysiin-tilmaame taas oo kordhinaysa raadka RAM.
Waa maxay nooca lagu rakibay MX-Linux? Halkee ayuu udhaxeeyaa noocii "ugu dambeeyay" ee lagu rakibay Mint iyo nooca "prehistoric" ee lagu rakibay Debian?
Waad salaaman tihiin, Sebas. Amarka "ku habboon raadinta qorfe" wuxuu soo sheegayaa kuwan soo socda: qorfe / xasilloon 3.8.8-1 amd64
Raspberry Pi 4: shirkad Isbaanish ah ayaa ka shaqeysa inay keento Vulkan
Ku qor liistada cusub ee 'Chrome 80' ogeysiiska xannibaadda iyo in ka badan